'भलिउड'मा चम्किएका चन्द्र - जीवनशैली - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १०, २०७४ मनोज पौडेल
काठमाडौं — ५० भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन गरिसकेका चल्तीका युवा द्वन्द्व निर्देशक चन्द्र पन्तलाई भलिउडको रमझमले तानेको छ । त्यसो त कलिउडका विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, रजनी केसीलगायत धेरै कलाकारलाई भोजपुरी चलचित्रले नतानेको होइन ।
दशकयता ठूलो फड्को मारेको भोजपुरी सिने उद्योगको मोहमा परेका पन्तले आफ्नो फिल्मी करियरको पहिलो चलचित्र निर्देशन नै भोजपुरीबाट गर्दैछन् ।
हाल वीरगन्ज क्षेत्र वरपर उनको भोजपुरी चलचित्र ‘निरहुवा चलल लन्डन’ को छायांकन धमाधम भइरहेको छ । असारे झरी दर्किरहँदा हवल्दार सुन्तली, मुखौटा, कृ, पल आदि चलचित्रको द्वन्द्व निर्देशन गरिसकेका पन्तको जोस रुझेको छैन । यो चलचित्रमा भोजपुरी सुपरस्टार दिनेशलाल यादव निरहुवा र चल्तीकी नायिका आम्रपाली दुबेको मुख्य भूमिका छ ।
साताअघि जोमसोम र पोखरामा चलचित्रको एउटा गीत तथा केही एक्सन दृश्य छायांकन गरेर वीरगन्जतर्फ आएको चलचित्र युनिट अहिले बाँकी दृश्य छायांकनमा व्यस्त छ । चलचित्रको ४० प्रतिशत दृश्यको छायांकन नेपाल र बाँकी लन्डन, स्कटल्यान्डमा गर्ने योजना रहेको पन्तले बताए । ‘६० दिनमा छायांकन सक्ने योजनाका साथ हाम्रो युनिट अहोरात्र काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसै गतिमा छायांकन भए योजनाबद्ध रूपमा आउँदो छठ पर्वका दिन चलचित्र रिलिज गर्न भ्याउने छौं ।’
पशुपतिनाथ प्रोडक्सन र खड्का फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माणाधीन चलचित्रको निर्माताद्वय सुरज खड्का र सोनु खत्री हुन् । नेपालको मात्र नभई भारतको समेत भोजपुरी चलचित्र इतिहासमै सर्वाधिक बजेटको दाबी गरिएको यो चलचित्रको लागत करिब ४ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको पन्त बताउँछन् । भोजपुरी चलचित्रका सुपरस्टार जोडी निरहुवा, आम्रपाली र कमेडियन मनोज टाइगर समेतलाई मात्र पारिश्रमिक १ करोड भारुभन्दा बढी दिइएको छ । कलिउडका सुनील थापा र रश्मि भट्ट पनि चलचित्रमा अभिनय गर्दैछन् । थापाको भागको छायांकन लन्डनमा हुने पन्तले बताए ।
८ वटा गीत रहेको चलचित्रको जोमसोममा गरिएको एउटै गीतको छायांकनमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा नेपाली चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाइसके पनि भोजपुरी चलचित्र भारत र नेपालमा मात्र सीमित रहेकाले त्यसको पनि स्तर बढाउने हाम्रो प्रयास हो,’ पन्त भन्छन् । चलचित्रमा भारतीय चलचित्र कलाकारबाहेक सम्पूर्ण प्राविधिक नेपालकै रहेको उनले बताए ।
आगामी महिना लन्डनमा आयोजना हुन लागेको भोजपुरी फिल्म अवार्डमा चलचित्रको पहिलो गीत सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको पनि उनले सुनाए ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७४ १६:४३
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा सबैको आँखा
श्रावण १०, २०७४ हेलो शुक्रबार
माइक्रोसफ्टले अघिल्लो साता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का लागि छुट्टै रिसर्च ल्याब खोल्ने घोषणा गरेको थियो । माइक्रोसफ्टको यो घोषणा कुनै नौलो थिएन किनकि यसअघि नै गुगल, एप्पलजस्ता उसका प्रतिस्पर्धी कम्पनी यो अभियानमा जुटिसकेका छन् ।
अहिलेका अधिकांश ठूला प्रविधि कम्पनीको ध्याउन्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अनुसन्धानमा छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई अर्को शब्दमा मेसिन लर्निङ पनि भन्न सकिन्छ । यसको सोझो अर्थ कुनै भौतिक मेसिन वा सफ्टवेयरले मानिसले बुद्धि लगाएर काम गरेजस्तै गर्न सक्ने प्रविधि हो । यसले गर्न सक्ने कामको सूची बनाउने हो भने निकै लामो हुन सक्छ ।
जस्तो : फेसबुकमा सामूहिक फोटो अपलोड गर्दा फोटोमा को–को व्यक्ति छन् भनेर चिन्न सक्ने भएको छ, फेसबुक । मानिसले आवाजमार्फत दिएको निर्देशनमा एप्पलको सिरीले मोबाइल र कम्प्युटरमा म्यासेज गर्ने, कसैलाई कल गर्नेदेखि अलार्म सेटसम्मका विभिन्न काम गर्न सक्छ । ठूला कम्पनीहरू कल सेन्टरबाट मानव जनशक्ति हटाएर सफ्टवेयरको भरमा आफ्ना उपभोक्ताको समस्याको सूची तयार पार्ने र त्यसलाई त्यसैमार्फत समाधान गर्न सक्षम भइरहेका छन् ।
यी केही उदाहरण भए जसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले समेट्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, बैंकिङ, प्रविधि, घरायसीसम्बन्धी अहिले धेरै सफ्टवेयर र उपकरणको विकास भएका छन् । त्यसमा प्रयोग भएका धेरै प्रविधिलाई एआई भन्न सक्छौं जसले मानिसले दिएको निर्देशन वा सिकाइको माध्यमबाट समस्या हल गर्न सक्छन् ।
फेरि अर्को उदाहरण लिऔं, मानिसले गर्ने काम अब रोबोटले गर्नेछ भनेर जति पनि चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ, ती सबै एआईमा भएको प्रगतिका उपज हुन् । कुनै मेसिन भनौं वा सफ्टवेयर त्यसले मानिसले गर्ने एकै प्रकृतिका काम सिकेर त्यसैअनुसारको काम गर्न सक्ने भएको छ । जस्तो : कुनै कम्पनीको सर्भिस सेन्टरमा आउने समस्याहरू उस्तै प्रकृतिका हुन्छन् र अधिकांश ग्राहकको प्रश्न पनि उस्तै प्रकारका हुन्छन् । हरेक ग्राहकलाई सोही उत्तर दिन र उनीहरूका सोही प्रश्नको जवाफ दिन मानिस नै भइरहनुपर्छ भन्ने छैन । यसका लागि कुनै सफ्टवेयरले त्यो काम गर्न सक्छ ।
जस्तो : कुनै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीमा हरेक पटक ग्राहकले फोन गर्ने र सोध्ने प्रश्न एकै प्रकृतिका हुन सक्छन् । मेरो इन्टरनेट चलेन वा स्लो भयो । यसका लागि त्यहाँ सर्भिस सेन्टरमा काम गर्ने मानव जनशक्तिले दिने उत्तर पनि एकै हुन सक्छ । यसका लागि मान्छे नै किन चाहियो र ? एकपटक सफ्टवेयर बनाउन खर्च गरेपछि वर्षौंसम्म मानव जनशक्तिलाई दिनुपर्ने तलबको रकम जोगिन्छ । यसैकारण धेरै कम्पनीहरू धेरै मानिस खटेर एकै प्रकारले गर्नुपर्ने कामका लागि मेसिन वा सफ्टवेयरमा निर्भर हुन चाहन्छन् जसका कारण उनीहरूले खर्चमा कमी आओस् । यसअघि मानिसलाई धेरै बल लगाएर गर्नुपर्ने एकै खालको कामलाई मेसिनले विस्थापित गरेको थियो अब भने मानिसले बुद्धि लगाएर गर्ने काम पनि विस्थापित हुने जोखिम बढेको हो ।
तर यो प्रविधिले मानिसको रोजगारी खोस्ने मात्रै होइन, रोजगारीको अन्य अवसर सिर्जना पनि गरिरहेको छ । किनभने यो प्रविधि आफैं जन्मिने नभई मानिसले नै निर्माण गरेका हुन् । र, यो मानव नियन्त्रणबाहिर पक्कै जाने छैन् । यद्यपि केही वैज्ञानिक र जानकारहरूले एआईको सीमालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज भने उठाउन थालिसकेका छन् किनकि मानिसले सिकाएको मेसिन वा सफ्टवेयर मानिसकै लागि जोखिम बनेको देख्न कोही चाहँदैन ।
त्यसैले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासमा संसारभर धेरै कम्पनी र समूह सक्रिय छन् जो मानिसका लागि उपयोगी सफ्टवेयर वा मेसिन बनाउन उद्यत छन् । मानिसको कामलाई विस्थापित गर्न सक्ने कुनै सफ्टवेयर वा मेसिन बनाउन सके त्यसले उनीहरूलाई दिने सफलता धेरै ठूलो हुन सक्छ, त्यसैले सानादेखि ठूला कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा खटिएका छन् ।
ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको लगानी यो क्षेत्रमा बढ्दो छ । उनीहरू एआईको क्षेत्रमा केही उपलब्धिमूलक काम गरिरहेका साना खालका कम्पनीहरू खोजी–खोजी किन्न चाहन्छन् जसका कारण उनीहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् । गुगलले मात्रै अघिल्लो वर्ष एआईको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेका ११ वटा कम्पनीलाई किनेर आफूमा समाहित गरिसकेको छ । उसले एआईको अनुसन्धानका लागि मात्रै डिपमाइन्ट र ब्रेनप्रोजेक्ट छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमार्फत आएको धेरथोर उपलब्धि उसले आफ्नो भर्चुअल असिस्टेन्ट टुल गुगल असिस्टेन्टमार्फत प्रयोगकर्तासामु बाँडिरहेको पनि छ । गुगलका असिस्टेन्ट एप्पलको सिरीजस्तै प्रविधि हो जसले प्रयोगकर्ताले आवाजमार्फत दिएको निर्देशनअनुसार मोबाइलमा विभिन्न काम गर्न सक्छ ।
गुगलले सुरुवात गरेको चालकविहीन कार बनाउने होडमा अहिले संसारका सबैजसो ठूला कार कम्पनीहरू समाहित भइसकेका छन् । उनीहरूले इमेजमार्फत सडकमा गुडिरहेको गाडीहरूको अवस्था मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार स्पिड नियन्त्रण गर्ने, साइड दिनेजस्ता काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसका लागि केही गाडी निर्माता कम्पनीहरूले आफ्नै रिसर्च ल्याब खोलेका छन् भने केहीले प्रविधि कम्पनीसँगको सहकार्यमा अनुसन्धानमा जोड दिइरहेका छन् । केही सहरमा चालकविहीन कार गुडाउने परीक्षण भइरहेका छन् ।
हरेक क्षण मानवीय विवेक आवश्यक पर्ने यस्तो कामका लागि त मानव आवश्यक नपर्ने अवस्था आइसकेको छ भने मानिसले सिर्जनशीलताबिना हरेक पटक एकै काम गर्ने पेसाहरू के होलान् ? अब विस्थापित हुन्छ । सबैको अनुमान यही छ ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७४ १६:४२